समीक्षा - उबर ईट्स, वाई वा नाई? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 2, 2021 मार्च 2, 2021 क्रिस्टिना किटोवा ब्लग
कोरोनाभाइरस महामारीको कारण उबर ईट्स राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो।
प्रत्येक अर्डरको लागि प्रशासनिक शुल्क छ।
उबर ईट्ससँग लाइभ ग्राहक सेवा छैन।
सोमबार, नयाँ कोरोनाभाइस लकडाउन यहाँ सुरु भयो सिम्को काउन्टीओन्टारियो। परम्परागत मार्च स्कूल बाट ब्रेक अप्रिलमा पनि सारिएको छ। तसर्थ, बाहिर भोजन विकल्प छैन। टेकआउट र खाना वितरण आवश्यक तरिकाले रेस्टुरेन्टबाट खाना खानको निम्ति मात्र तरिका हो।
यसले Uber Eats जस्ता प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ता र राजस्वमा ठूलो बृद्धि हुन अनुमति दियो। वास्तवमा, खाना वितरण २०२१ मा बढ्ने आशा गरियो। Uber Eats उत्तर अमेरिकामा सबैभन्दा लोकप्रिय खाना वितरण सेवाहरू मध्ये एक हो।
उबर मुख्य पृष्ठ।
उबरले खाका तथ्या :्कहरू:
प्लेटफर्मले २०२० मा revenue 4.8 billion अर्ब राजस्व कमायो। यो १2020२% बर्षे बर्ष बढेको छ।
पेश गरिएको तथ्या .्कका अनुसार उबर ईट्सको कूल बुकिंग $ $० बिलियन भन्दा बढी थियो।
सेवाको सदस्यता लिने त्यहाँ million customers लाख भन्दा बढी ग्राहकहरू छन्।
उबेर ईट्सको विश्वव्यापी खाना वितरण बजारमा २%% ग्लोबल मार्केट शेयर छ।
प्लेटफर्मले लगभग ,600,000००,००० रेष्टुरेन्टहरूसँग काम गर्दछ।
उबर ईट्स मार्केटिंग ईमेलले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि सँधै छुट प्रदान गर्दछ र $ १ over भन्दा माथि अर्डरमा डिलिभरी शुल्कको साथ एक महिना निःशुल्क सदस्यता प्रयास गर्न विकल्प छ। मैले try २० भन्दा बढि कुनै अर्डरको १० डलरको प्रस्ताव लिएर शून्य डेलिभरी शुल्कको साथ एक महिनाको नि: शुल्क सदस्यता प्राप्त गरेपछि सेवा खोजी गर्ने निर्णय गरे।
यो नोट गरिनु पर्छ कि उबर ईट्सले डेलिभरी शुल्क लिन्छ र उनीहरू रेष्टुरेन्टमा आधारित हुन्छन्। थप रूपमा, प्रत्येक अर्डरको लागि प्रशासनिक शुल्क पनि छ, जुन कम्तिमा अर्को $--4 डलर विज्ञापन गर्दछ। साथै, एक सुझाव उबेर ड्राइभरको लागि प्रोत्साहित गरिएको छ। औसतमा, उबर ड्राइभरहरू प्रति घण्टा $ १२ मा करीब बनाउँछन्।
मैले अनुप्रयोग डाउनलोड गरेर दर्ता गरें। त्यहाँ विभिन्न रेस्टुरेन्ट र खाना पकाउने विकल्पहरू छन्। मैले खानाको एसियाली शैलीको लागि रोजें, र प्रोमो कोड लागू गरियो $ १० छुट पाउनको लागि, र वितरण शुल्क माफ गरियो। जे होस्, मैले अझै $ 10। Administrative को प्रशासनिक शुल्क तिर्नुपरेको थियो।
मेरो अर्डरको वितरणको लागि अनुप्रयोग समय फ्रेम 50० मिनेट थियो। Minutes 56 मिनेट पछि, मेरो अर्डर आइपुगे, मैले ढोकामा ड्राईभरलाई भेट्ने निर्णय गरे पनि। यद्यपि ती निर्देशनहरूको पालना गरिएको थिएन। मेरो खाना मेरो ढोका बाहिर भुइँमा बाँया समाप्त भयो।
मेरो चिन्ताको विषय के थियो कि मेरो रक्सीले यसमा कुनै पनि सुरक्षा कभर बिना नै पराल थियो। मैले पराललाई बाहिर फालिदिएँ, जस्तो कि मलाई यो रोग लागेन।
उबर ईट्स डेलिभरी
जब म मेरो अर्डर खोल्छु, यो मैले आदेश गरेको कुरा होईन। मैले चामल चाउचाउने लो मेइनको लागि अर्डर राखें, र यसको सट्टामा मलाई उमालेको चामलको साथ तरकारीहरू दिइयो।
म अनुप्रयोगमा फर्कें र कुराकानी विकल्प मार्फत ग्राहक सेवा सम्पर्क गर्न रोजें र गलत अर्डरको छवि पेश गरें। म निश्चित छैन कि च्याट प्रतिक्रिया बोट वा एक वास्तविक व्यक्ति बाट थियो।
कुनै समाधान भएन र मलाई भनियो कि यो ग्राहक सेवा च्याट विकल्पको अधिकार भन्दा बाहिर छ। मैले मेरो जानकारी छोड्नुपर्‍यो र मलाई भनियो कि अर्को विभागले मलाई 48 48 घण्टामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। यसको मतलब यो हो कि मेरो अर्डरलाई प्रतिस्थापन गरिने छैन, किनकि hours XNUMX घण्टामा यो ढिलो हुनेछ।
समग्रमा, उबर ईट्स एक बिलन-डलर राजस्व उद्यम हो। त्यहाँ कुनै लाइभ एजेन्टहरू छैनन् एक अर्डरको साथ मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न। यसले मलाई धेरै असहज बनायो जब ग्राहकसँग यस्तो आदेश छ जुन वास्तविक समयमा सम्बोधन गर्न सकिदैन।
जब प्रशासनले अर्डरको सवालमा समस्याहरू सुविधाजनक बनाउन सक्दैन, तब किन प्रशासनिक शुल्क लिने? म उबर ईट्स, अवधिबाट अर्डर गर्ने सिफारिश गर्दिन।
सांप्रदायिक समाचार वितरण खाना वितरण Uber Uber Eats
आईआरएस पत्रहरूले किन केहि २०२० रिकभरी रिबेट क्रेडिट अपेक्षित भन्दा फरक हुन्छ भनेर वर्णन गर्दछ
स्पटलाइटमा एप्पल - एप्पलको आईफोन १ From बाट के आशा गर्ने
तपाइँ एक वकिल संग काम को बारे मा थाहा पाउनु पर्छ
प्रसारण उपकरण बजार आकार, सेयर, प्रचलनहरू - उद्योग रिपोर्ट (२०२०-२2020२))
टंगेरrang इन्डोनेशिया (थोक र B2B मार्केटप्लेस) अनलाइन र बचत गर्नुहोस्
अनलाइन थोक र B2B बजार
नाइस फ्रान्स (होलसेल र B2B मार्केटप्लेस) शपलाइन अनलाइन र बचत गर्नुहोस्
ह्याम्बर्ग जर्मनी (थोक र B2B मार्केटप्लेस) अनलाइन र बचत गर्नुहोस्
तपाईंको आफ्नै बाल अभ्यास अभ्यास कसरी सुरू गर्ने
ती घरबारविहीनताको अनुभवले आर्थिक प्रभाव भुक्तान र अन्य कर सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दछ - स्थायी ठेगाना आवश्यक छैन
Simple सरल र सजिलो तरीका घर र कार्यस्थलमा वातावरणलाई मद्दत गर्ने
Th चीजहरू जुन तपाईलाई आफ्नो व्यवसायको लागि आईटीको बारेमा थाहा थिएन
आईआरएस, कोषागार अमेरिकी मिलियन उद्धार योजना अन्तर्गत २ लाख बढी आर्थिक प्रभाव भुक्तानी - VA लाभार्थीहरु जम्मा १2M मिलियन ल्याउँछ भुक्तान जारी
घर नवीकरण - Tools उपकरणहरू तपाईंलाई ठेकेदारको रूपमा चाहिन्छ